Dawladda Kuuriyada Waqooyi Oo Midaynaysa Qoysas 60 Sanno Kala Maqnaa – somalilandtoday.com
Dawladda Kuuriyada Waqooyi Oo Midaynaysa Qoysas 60 Sanno Kala Maqnaa
(SLT-Pyongyang)-Dad u dhashay Kuuriyada Koonfureed oo da’doodu tahay 89 sano ayaa u socdaalaya Kuuriyada Waqooyi si ay u soo arkaan qaraabadooda oo aysan arag tan iyo markii uu billawday dagaalkii Kuuriya ee socday 1950-1953.
“Isma dhihin maalin sidan oo kale ah ayaa iman doonta,” ayay tiri, Mana hubo in uu nool yahay in kale.”
Waxay Kuuriyada Waqooyi soo joogi doonaan saddex maalmood, balse saacado kooban ayay eheladooda la joogi doonaan maalin walba – guud ahaanna waxay isku noqon doontaa 11 saacadood. Inta badan booqashadooda aad ayaa korka loogala socon doonaa.
Kulankan oo ay soo qaban qaabisay hay’adda Laanqayrta Cas, ayaa qayb ka ahayd booqashadii taariikhiga ahayd ee bishii Abriil dhex martay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un iyo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in.